စပိန်ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ ‘Money Heist’ မှာ မြင်တွေ့ရမယ့် နေမာ | Mizzima Myanmar News and Insight
စပိန်ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ ‘Money Heist’ မှာ မြင်တွေ့ရမယ့် နေမာ
အားကစား နိုင်ငံတကာ ဖျော်ဖြေရေး နိုင်ငံတကာ
ဘရာဇီးလ်ဘောလုံးကြယ်ပွင့် နေမာက Netflix မှ ဖြန့်ချိမယ့် နာမည်ကြီး စပိန်ရုပ်သံဇာတ်လမ်းအတွဲသစ် "Money Heist" မှာ သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးအနေနဲ့ ပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့ အင်္ဂါနေ့က ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
နေမာဟာ လာမယ့်တနင်္လာနေ့မှာ ဥရောပအပြောင်းအရွှေ့စျေးကွက် မပိတ်သိမ်းခင် ခေါ်ယူနိုင်ရန် ကြိုးစားနေတဲ့ စပိန်ကလပ်နှစ်သင်းဖြစ်တဲ့ ဘာစီလိုနာနဲ့ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်တို့ဆီ ပြောင်းရွှေ့ခွင့်မရမှာကိုလည်း စိုးရိမ်နေပါတယ်။
"ကျနော်တို့ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေ ဆက်လုပ်နေပါတယ်။ ပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့ နီးစပ်နေပါပြီ။"လို့ ဘာကာဒါရိုက်တာ ဂျဗီယာဘော်ဒက်စ်က ပဲရစ်မြို့မှာ ပီအက်စ်ဂျီအသင်းနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအပြီး အပြန် ဘာစီလိုနာလေဆိပ်မှာ သတင်းထောက်တွေကို ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် "သဘောတူညီမှုတော့ အခုထိ မရယူနိုင်သေးဘူးလို့"သူက ဆက်ပြောပါတယ်။
ပြင်သစ်သတင်းစာ Le Parisien အရ နေမာရဲ့ အသင်းဟောင်းဟာ ကစားသမားတွေ အလိုက်ပေးပြီး ပြောင်းရွှေ့ကြေး ယူရိုသန်း (၁၇၀)ကို အရစ်ကျ (၂)ကြိမ်ပေးသွင်းပြီး ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်တို့ ဆိုပါတယ်။
Cant wait for the next season. #MoneyHeist pic.twitter.com/zDDRnsw2Nu
— Jordane (@Jordane70376145) August 27, 2019
ဘာကာဟာ အသက် (၂၇)နှစ်အရွယ် နေမာကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်က ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေး ယူရို (၂၂၂)သန်းနဲ့ ပီအက်စ်ဂျီအသင်းထံ ရောင်းချခဲ့တာပါ။
နေမာဟာ Netflix ရဲ့ မှုခင်းဒရာမာစီးရီး Money Heist (စပိန်လို La Casa de Papel သို့ The Paper House) မှာ ပါဝင်ရမှာဖြစ်လို့ ပျော်ရွှင်မိကြောင်း အစောပိုင်းက တွစ်တာမှာ ရေးတင်ခဲ့ပါတယ်။
"ကျနော့်ရဲ့ အိပ်မက်ကို သဘောပေါက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ကျနော့်အကြိုက်ဆုံး စီးရီးမှာ တစိတ်တပိုင်းအနေနဲ့ ပါဝင်ခွင့်ရနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဂျိုအာ (သူ့ရဲ့ ဇာတ်ကောင်နာမည်)ကို ခင်ဗျာတို့အားလုံးနဲ့အတူ အခု ကျနော် ဝေမျှနိုင်ပါပြီ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် @lacasadepapel!"လို့ နေမာက သူ့ရဲ့ တွစ်တာ followers တွေကို ပြောခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ကြေးအကြီးဆုံးကစားသမားဟာ စပိန်ဘဏ်ကို ဓားပြတိုက်တဲ့ မှုခင်းဒရာမာ Money Heist ရဲ့ Season3မှာ အပိုင်း (၂)ပိုင်း(အပိုင်း ၆ နဲ့ ၇) မှာ ဘုန်းတော်ကြီး ဇာတ်ကောင်အနေနဲ့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
နေမာရဲ့ ၅၂ နှစ်အရွယ် မိခင်နဲ့ ၂၂ နှစ်အရွယ် ကောင်လေးရဲ့အချစ်ဇာတ်...
နေမာ အငယ်စားလေးလို့ မှတ်ချက်ပေးနေကြတဲ့ ဘရာဇီးနိုင်ငံက ဘောလုံးပါ...
neymarMoney HeistNetflixLa Casa de PapelThe Paper House